घुन्सामा दुई फुटसम्म हिउँ, हिमपातले गाउँ अन्धकारमा - नेपालबहस
घुन्सामा दुई फुटसम्म हिउँ, हिमपातले गाउँ अन्धकारमा
| १९:४१:१३ मा प्रकाशित
२४ माघ, फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ घुन्सामा शुक्रबार बेलुका ६ बजेदेखि निरन्तर हिउँ परेसँगै चिसोले पानी जमेपछिविद्युतगृह बन्द भएको छ । शुक्रबारदेखि निरन्तर हिमपात भइरहेको घुन्सा गाउँका स्थनीयवासी केल्साङ शेर्पाले जानकारी दिए।
शेर्पाले भने, “हिजोदेखि निरन्तर हिम पात भइरहेको छ । अहिले करिव दुई फुटसम्म हिउँ जमेको छ ।” सबैतिर सिसाजस्तै हिउँ जमेको शेपाले बताए । विद्युत् लागि निर्माण गरिको पोखोरीमा हिउँ थुप्रिएको र चिसोले पानी सिसाजस्तै जमेपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको शेर्पाले जानकारी दिए। पैतीस किलोवाटको घुन्सा विद्युत् बन्द हुँदा गाउँ नै अध्यारोमा बस्न बाध्य भएको शेर्पाले बताए।
पानीका मुहान जमेपछि खाने पानीको समेत समस्या परेको उनले बताए । उनले भने, “चिसोको कारण घर बाहिर निस्कन सकिँदैन । घरभित्र आगो तापेर बस्नुपर्छ ।” जनजीवन निकै प्रभावित भएको शेर्पाले बताए । फले निवासी लाक्पा भोटियाका अनुसार हिजोदेखि निरन्तर हिउँ परिरहेको छ ।
घुन्सा गाउँ समुन्द्र सतहदेखि तीन हजार ५०० मिटर उच्चाइमा पर्दछ । यस्तै समुन्द्र सतहदेखि तीन हजार २०० मिटर आलाङचुङगोला र समुन्द्र सतहदेखि चार हजार २०० मिटर उचाइका याङमा गाउँ पर्दछ । यस वस्तीमा शुक्रबार बेलुकीदेखि बाक्लो हिउँ परिहेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ निवासी मनुकुमार राईले बताए । हिमाली क्षेत्रका समुदाय हिमपातले प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।
महिला लघुवित्तको आईपीओ आज बाँडफाँड गरिदै, यी तीन ठाँउबाट नतिजा हेर्न सकिने ? ३ मिनेट पहिले
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न ९ मिनेट पहिले
घुससहित औषधि विभागका अधिकृत पक्राउ १७ मिनेट पहिले
नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम तीव्र रुपमा १९ घण्टा पहिले
हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्छौ : मुख्यमन्त्री पौडेल १५ घण्टा पहिले
म्याद सकिएको सामग्री बिक्री आरोपमा व्यापारीलाई जरिवाना २० घण्टा पहिले
कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को अध्यक्षमा फेम्बू चयन १५ घण्टा पहिले
चैनपुरको श्रेष्ठ आयलमा आगलागी ३ दिन पहिले
अनुमति बिना औषधि ओसारपोसार गर्ने तीन जना पक्राउ ४ दिन पहिले
वर्ल्डलिंकद्वारा नेपालका सबै प्रदेशमा विश्वस्तरीय इन्टरनेट डाटासेन्टर निर्माण गर्ने ४ हप्ता पहिले
सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै ‘आयोडिन मन्थ’ मनाईने ४ हप्ता पहिले
साना किसान लघुवित्तलाई कर्मचारी आवश्यकता ४ हप्ता पहिले
आज सुनकाे मूल्य तोलामा ९० हजार ! २ हप्ता पहिले
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई हाउस अफ ईन्टेरियरको सेवामा आर्कषक छुट ७ महिना पहिले
एसियाली बजारमा तेलको मूल्य फेरि घट्यो ११ महिना पहिले
प्रदेश सरकारले दिलिपको परिवारलाई पाँच लाख दिने १ वर्ष पहिले
राष्ट्र बैंकले ५० को नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याउने ८ महिना पहिले